नेपाल चिकित्सक संघ कोशीको निर्वाचन सुरू, भोलि बेलुकादेखि मतगणना हुने - News Birat
विराटनगर, ४ माघ । नेपाल चिकित्सक संघ कोशीको कार्यसमितिको निर्वाचन सुरू भएको छ । संघमा पहिलोपटक दुई प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो । यसअघि १२ वर्ष पहिले केही पदका लागि मात्रै निर्वाचन भएको थियो । पहिलोपटक प्यानलै बानाएर डाक्टरहरू नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनमा होमिए पनि पार्टीगत प्यानल भने आफूहरूले नबनाएको उनीहरूको दाबी छ ।
१३ सदस्यीय कार्यसमितिको एकातर्फको प्यानलमा निवर्तमान अध्यक्ष डा. फरवाड सिलवाल छन् । अर्को प्यानलको अध्यक्षमा डा. कैलाश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । १ हजार २ सय ८१ मतदाता रहेको संघको निर्वाचनमा मतदानको समय १० देखि ५ बजेसम्मलाई तोकिएको थियो । डाक्टरहरूको व्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर दुईदिन मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आइतबार र सोमबार मतदान भएपछि सोमबार बेलुकादेखि मतगणना हुन सक्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता रवि वास्ताकोटीले जानकारी दिए ।
बास्ताकोटीका अनुसार निर्वाचनमा मतदाताहरूको सहभागिता उत्साहजनक छ । दुवै प्यानलमा गरी २६ जना डाक्टरहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । आइतबार दिउँसोसम्ममा ३ सय २० मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आईतवार, ४ माघ २०७७, २०:१२ January 17, 2021 मा प्रकाशित